JanaSandeshमुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट किन हटिन् दीपाश्री ? - JanaSandesh
JanaSandesh > मनोरन्जन > मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट किन हटिन् दीपाश्री ?
२०७७ असोज २० गते १७:२१ मा प्रकाशित
कश्मिरको पुलवामा आक्रमणमाथि गरेको टिप्पणी विवादमा परेपछि गत वर्ष भारतको चर्चित कमेडी कार्यक्रम ’द कपिल शर्मा शो’बाट नवजोत सिंह सिद्धू निकालिएका थिए । आतंककारीको कुनै जात र धर्म नहुने भन्दै आक्रमणका लागि कुनै देश वा व्यक्तिलाई दोषी भन्नु गलत रहेको राय राखेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को विरोध भयो । उनी ट्रोलका शिकार बने ।
सिद्धू पाकिस्तानप्रति नरम देखिएको भन्दै धेरैले उनलाई ’द कपिल शर्मा शो’बाट निकालिदिनुपर्ने कुरा राखे । उनी शोमा रहिरहे कार्यक्रम नै नहेर्ने भन्दै दर्शक सामाजिक सञ्जालतिर खनिए । त्यसपछि दर्शकको ’मुड’ हेरेर च्यानलले उनलाई शोबाट हटाइदियो ।
यो सिद्धुकैजस्तो केस त होइन तर दीपाश्री निरौला जीतु नेपालको ’मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट बाहिरिएकी छिन् । अब शोको दोस्रो सिजनमा उनको ठाउँमा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर देखिने भएकी छिन् । पछिल्लो समय दीपा ’महानायक’ विवादमा मुछिएकी थिइन् । राजेश हमालबारे दिएको अभिव्यक्तिकै कारण सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना गरिएको थियो । विवादका क्रममा आएका नकारात्मक टिप्पणीले आफू ’डिप्रेसन’को नजिक पुगेको पनि उनले कान्तिपुरलाई बताएकी थिइन् ।
विवादपछि नै उनी ’मुन्द्रेको कमेडी क्लब’बाट बाहिरिएको समाचार बाहिरियो । विवादकै कारण उनलाई निकालेको भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ । विवादकै कारण आफूप्रति नकारात्मक भएका दर्शकका कारण कार्यक्रमलाई असर नगरोस् भनेर कार्यक्रमबाट बाहिरिएको दीपा बताउँछन् । ’विवादपछि जति दर्शक मप्रति नकरात्मक हुनु भएको छ ती दर्शकले जीतुलाई असर गर्ला कि भनेर डर लाग्यो । अरु त केही होइन । जीतु बनिनु नै मेरो लागि खुशीको कुरा हो । जीतुको कार्यक्रम नबिग्रियोस् भनेर म आफैं पछाडि सरेंको हो,’ उनले भनिन्, ’म फिल्म बनाउँछु, यताको राम्रो नराम्रो मलाई थाहा हुन्छ नि त । जीतुको हकमा उसका लागि प्रमुख भनेको कार्यक्रम नै हो । त्यसैले मेरो कारणले भोलि उसलाई नानाथरिका कुरा आउला भनेर सल्लाह गरेरै कार्यक्रम छोडें ।’
पहिलो सिजनमा आफूले कार्यक्रम अवधिभर रमाइलो गरेको बताउँछिन् दीपा । ’म एकदम हाँस्न मन पराउने मान्छे । पहिलो सिजनमा दर्शकले मेरो हाँसो र कमेडी राम्रो थियो भनेर कमेन्ट गरिदिनु भयो । म करिश्मा दिदीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु,’ उनले सुनाइन् ।
’मुन्द्रेको कमेडी क्लब’का संचालक जीतु भने निर्माण टिमले नै कार्यक्रमको अध्यक्षता परिवर्तन गर्ने कुरा राखेपछि अभिनेत्री करिश्मा फाइनल भएको बताए । ’पहिलो सिजनमा ७६ श्रृङ्खला हामीले बनायौं । दोस्रो सिजनमा हाम्रो कलाकार चेन्ज छ । सेटअप पनि चेन्ज छ । त्यसैले अध्यक्ष पनि परिवर्तन गरौं भन्ने निर्माण टिमले कुरा गर्नुभयो । त्यसैले हामी तयार भएका हौं,’ उनले भने, ’विवादकै कारण भन्ने चाहिँ होइन ।’